Mudane Ra’isul wasaare, maamul u sameynta gobollada iyo sameyntii sharcigii ay ku shaqeyn lahaayeen keebaa horreeya? | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Mudane Ra’isul wasaare, maamul u sameynta gobollada iyo sameyntii sharcigii ay ku shaqeyn lahaayeen keebaa horreeya?
06/08/2014 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaan rabaa inaan marka hore ka mahadceliyo kulankii quruxda badnaa ee ka dhacay hotel Jaziira oo uu raisulwasaare Cabdiweli Shiikh Axmed kaga jawaabayay su’aalihii dhalintii ka soo qeyb gashay shirkaas ay ku weydiinayeen, oo ay mahadi ha ka gartee ay soo qaban qaabisay heyadda Heritage. Runtii waxa uu ahaa kulan aad loogu baahnaa waxaana rajeyneynaa inuu soo noqnoqdo.
Haddii aan u soo noqdo dulucda maqaalkaan, waxaa shalay raisul wasaaraha la weydiiyay su’aal aan aad ula dhacay oo sida uu sheegay isagu ay weydiisay gabar Soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay magaceeda Dahabo, jawaabteedana uu ka dhigay “ Waa sax wasaaraduhu uma shaqeeyaan si federal ah, waxaana wadnaa sharcigii arintaas wax looga qaban lahaa.” Hadaba su’aashu waxa ay tahay ma sharcigi ay ku shaqeyn lahaayeen gobolladu oo iyaga iyo dowladda federaalka kala xadidi lahaa ayey sax tahay in marka hore la sameeyo mise waa in marka hore la sameeyo maamul goboleedyo amaba la magacaabo guddoomiyaal gobol aanan garaneynin shuruucdii u dhaxeysay iyaga iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya?
Ugu yaraan arintani waa arin u baahan in si deg deg ah loo saxo oo wax looga qabto si loo helo wax la fahmi karo. Tusaalaha su’aasha gabadha Soomaaliyeed ku jiray ayaa ah mid ay uga hadashay sida ay wasaaradda maaliyaddu u shaqeyso, oo runtii cad inaysan ku shaqeyneynin qaab federal ah oo iyadu u eg inayba shuruucda iyo weliba qaabka ay wax u maamulayso aysan waxba ka duwaneyn tii dowladdii Siyaad barre. Hadaba dowladani, maadaama ay meel kasta la taagan tahay dowlad federal ah ayaan nahay maxaa hadalkooda iyo ficilkoodu isugu ekaan la’ yahay?
Tusaalaha kulankaas laga sheegay oo lagu carabaabay wasaaradda maaliyadda, waxaa la mid ah wasaaradaha kale oo dhan oo ay ugu horeeyaan wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale oo uu xiriirka miliqsan uu kala dhexeeyo maamullada cusub iyo gobollada guddoomiyayaalka loo magacaabay. Waxaan hubaa in sida ay hadda wax yihiin inaysan aheyn qaab wax loo qaban karo oo waxaa taas ka marqaati ah qof kasta oo isku daya inuu howl ka qabto magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliya oo waxaa la kala garan la’ yahay cida ay sida tooska ah u quseyso howsha aad rabto inaad qabato.
Waxaana sax ah in aysan dowladdu magacaabin amaba aysan u ololeyn maamul sameyntiis, haddii aysan u diyaarsaneyn sidii ay maamulladu isula shaqeyn lahaayeen, oo aysan weliba cadeyn xiriirka ka dhexeeya wasaaradaha federaalka iyo maamulka gobolka waaxdiisa howshaas u xilsaaran. Marka qaab maamulku noo cad yahay, oo la garanayo sida ay wax u wada shaqeynayaan ayaan u maleynayaa inay sahlanaaneyso in la isla xisaabtamo oo uu weliba maamulku fududaado shacabkuna ogaanayaa maamulka ay tahay inay la xiriiraan.
Gabagabadii, u malayn maayo in raisul wasaare Cabdi weli jawaabtiisu ay tahay mid lagu qancaayo, waayo waxaa laga rabaa inuu wasaarad kasta kula xisaabtamo soo gudbinta hindise sharciyeedka ay maamulkii ay horay u heyn jireen ay ugu gudbin lahaayeen maamullada hoose maadaama ay iyagu yihiin wasaarad federal ah oo aan wax shaqo ah aanan ku laheyn maamullada hoose oo iyaga laga rabo oo kaliya inay abuuraan siyaasadda guud uu dalku ku shaqeynayo iska markaasna ay ku kormeeraan gobollada iyo maamuladda kale. Taas ayaana ah midda keeni karta isla shaqeyn fududeysa mustaqbal la isla xisaabtami karo oo uu gobol kastaaba garanayo cidda uu wax ka sugaayo iyo weliba sida loola xisaabtami doono. Haddiise ay howshu sida ay hadda tahay ku sii socoto waxaan ka cabsanayaa in isqabqabsiga wasaarada dhexdooda ah oo ay howshu ka socon la’dahay ay ku soo darsoomi doonto mid ka yimaada xagga maamullada dalka loo sameynaayo waxaana ku talinayaa in xafiiska raisul wasaaruhu uu arintaas xil gooni ah iska saaro si looga baxo mugdiga sharciga maamulka oo isagu hareeyay howlaha dowladda oo dhan ha ahaato midda federaalka amaba dowladaha hoose.
W/Q: A. A. Asir
2 Responses to “Mudane Ra’isul wasaare, maamul u sameynta gobollada iyo sameyntii sharcigii ay ku shaqeyn lahaayeen keebaa horreeya?”
Musse Ali Says:
Waxaa hubanti ah in Wasiirka koowaad iyo golihiisa wasiiraduba aysan ka fikirin magaca ay sheeganayaan oo ah dowladda federaalka ah. Taas waxaa marqaati u ah shaqada ay dalka u hayaan oo aan dhaafsiisnayn magaalada Muqdishu iyo xafiisyada ay ku shaqeeyaan. Ma jiro daqli ka soo gala gobolada dalka marka laga reebo dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho Fiiri miisaaniyadda la ansixiyey sanadka 2014. Dowlad goboleed aan aqoonin xariirka kala dhexeeya dowlad dhexe sidee ayey ku shaqeyn karaan?. Waxaa fursad helaayo madaxda maamulada aan dan badan ka laheyn dowladnimada balse doonaayo magac iyo maal dhaqso ah. Taasna waxaa sababteeda leh dowladda dhexe sida aad maqaalkaba ku tilmaantay. Waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan oo aad u iftiimisay arintaan murugada leh.
Mudane Muuse Ali waan ku salaamay.
Sxb howshan maamul u sameynta dalka waxaadba u maleysaa inaanan la fahansaneyn oo xattaa madaxda dalka ayba iyagu u jeedin meesha u baahan in wax laga qabto inta aanan maamullo la sameynin. Waxaan hubaa haddii ay si sax ah howsha u fiiriyaan inay arki karaan meesha ay caqabaddu naga heysato oo ay maamulladdi horay ay u dhiseen ay wax qabad ula imaan la’ yihiin. Ilaahow xaqa fahansii.
A. A. Asir
« Wasaaradda Maaliyaddu Ma Federaalbaa mise Muqdisho kaliya ayey Wasaarad u tahay?(Xaqiiq badan Ogow)
Ujeedka Dawladdnimo: ma dhisid baa mise waa dhawrid?! »